I-China i-sweet and Sour Spare Ribs mveliso kunye nabenzi | Huikang
Iimbambo eziSwiti kunye neSour Spare (Iimbambo eziSwiti kunye neeSour Spare) sisitya esimelwe ngokwesiko elinencasa emnandi nenencasa. Isebenzisa iimbambo ezintsha zehagu njengesona sithako siphambili, inyama intsha kunye nethenda, kwaye umbala wesitya ogqityiweyo ubomvu kwaye uyakhazimla.
"Iswiti kwaye imuncu" yincasa enazo zonke iicuisine eziphambili zaseTshayina. Iimbambo zehagu ezimnandi nezinencasa zivela eZhejiang kwaye isitya esiqhelekileyo saseZhejiang.
Iimbambo zenyama yehagu ezimnandi nezinencasa zibaluleke kakhulu malunga neendlela kunye nezithako. Ngokubanzi, iimbambo kunye neembambo zisetyenziswa. Iimbambo zehagu kufuneka zisuswe egazini, zixutywe kwaye zihlanjululwe ngenxa yencasa, emva koko yambathiswe ngomgubo kunye ne-fried deep de umphezulu ube golide kunye ne-crispy. Thatha ukusetyenziswa kamva. Emva kokufunyanwa kombala weswekile, iimbambo ziyathotywa epanini, kwaye ekugqibeleni zifakwe irayisi yeviniga yencasa emnandi nenencasa. Irayisi iviniga kufuneka isetyenziswe apha. Incasa yeviniga endala inamandla kakhulu kwaye ichaphazela incasa!
Izinto ezisetyenzisiweyo kwizidlo zaseShanghai zimnandi nje kwaye zimuncu. Isosi yetomato isetyenziswa kwincasa. Le ikwaluphawu lokutya kwaseShanghai. Cuisine yeZhejiang ityebile ngezixhobo, intle kwaye igcwele umbala, ivumba elimnandi kunye nencasa. Cuisine yeSichuan lolona khetho lufanelekileyo kwiimbambo zehagu ezimnandi nezinomuncu. Bhangqa neswekile, ityuwa kunye neviniga.
Isosi yeembambo zehagu ezimnandi nezinomuncu zizitya zaseShanghai kuphela ezineesosi zetumato. Izitya zaseShanghai zinencasa elula, ngelixa izitya zeZhejiang kunye nezitya zeSichuan zibaluleke ngakumbi. Iimbambo zehagu eziswiti nezomuncu ze cuisine yase Shanghai kunye ne Zhejiang kukutya okuphekiweyo, ngelixa iimbambo zehagu enencasa nezomuncu kwi cuisine yase Sichuan sisitya esaziwayo esibandayo eSichuan. Isebenzisa indlela yokupheka ethosiweyo enzulu. Yeyencasa emnandi neyomuncu, ine-amber enamafutha, ivumba elomileyo kunye nokuthambisa. Umuncu kwaye mellow, sisibheno esihle okanye isibheno. Uthandwa kakhulu ngabantu baseTshayina.
Iimbambo zenyama yehagu emnandi kunye emuncu yeHuaiyang idibanisa iimpawu zoko kutya kweZhejiang kunye nokutya kwaseSichuan kubuchwephesha, kwaye kudibanisa iimpawu zokutya kwaseShanghai kwincasa. Linongwe ngeswiti kwaye limuncu, itswele kunye negalikhi, kunye nokugoba okuthosiweyo ngeoyile. Imbali yeembambo zehagu ezimnandi nezinomuncu ezenziwe kwi-Huaiyang cuisine ezimfutshane kunezinye iivenkile ezintathu.
Egqithileyo I-Chongqing Inkukhu enongwe
Okulandelayo: Inkukhu ye-Kung Pao
AbaThengisi bokutya abaFriziweyo